Erdogan: Shuruudaha Qatar lagu xidhay sharciga caalamiga ah ayey lid ku yihiin - Worldnews.com
Qatar ayaa ku tilmaantay shuruudahaa
Israel oo xidhaysa xafiiskii Aljazeera
Israel ayaa doonaysa in ay xidho xafiiska telefishanka Qatar laga leeyahay ee Al-Jazeera ku leeyahay dalkeeda, isla markaana ay ruqsadda kala noqoto warfidiyeenka ka...
BBC News 2017-08-06
Erdogan oo qorshe dalka lagu xasilinayo soo bandhigaya
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa maanta la filayaa in uu soo bandhigo qorshe uu doonayo in uu dalka ku xasiliyo marka uu kulan deg deg ah la yeesho...
Trump: Sii daynta baadarigu wax tar bay u tahay xidhiidhka Turkiga iyo Maraykanka
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa Aqalka Cad ku qaabilay Andrew Brunson, oo ah baadari muddo laba sanadood ah ku jiray xabsi ku yaal dalka Turkiga oo laga sii...
Qatar oo mamnuucday badeecadaha dalalka go'doomiyey soo saaraan
Xukuumadda Qatar ayaa amar ku bixisay in badeecadaha ay soo saaraan dalalka Sucuudiga, Imaaraat-ka, Baxrayn iyo Masar ee lagu iibinayo dukaamada waawayn ee dalkeeda gabi...
BBC News 2018-05-26
Madaxweynaha Turkiga, Racep Tayyip Erdogan, ayaa tobanaan kun oo qof u jeediyey khudbad qiiro leh, dadkaas oo iskugu soo baxay xuska sannad guuradii koobaad ee ka soo...
Iran ayaa dalka Qatar u dirtay diyaarado sida cunno, ka dib markii xiisadda ka taagan Khaliijka ay saamaysay wax soo dhoofsashada dalkaasi yar ee ay isku kacsan yihiin...
Iran ayaa dalka Qatar u dirtay diyaarado sida cunno, ka dib markii xiisadda ka taagan Khaliijka ay saamaysay wax soo dhoofsashada dalkaasi yar ee ay isku kacsan yihiin waddamada jaarka la ah. Shirkadda diyaaradaha qaran ee Iran ayaa sheegtay in shan diyaaradood oo sida cunno iyo khudaar ay u duuleen dalka Qatar. Ilaa iyo hadda lama sheegin...
Amiir reer Qatar ah oo sheegay in uu Imaaraatka ku xidhanyahay
Mid ka mid ah qoyska xukuma Qatar ayaa sheegay inuu ku xidhanyahay dalka Imaaraatka Carabta. Fariin muuqaal ah oo uu ku baahiyey YouTube-ka ayuu Cabdallah Bin Cali Al-Thaani ku sheegay in uu marti u ahaa dhaxal sugaha taajka Imaaraatka, Maxamed Bin Saayid Aal...
Erdogan oo booqanaya waddamo Gacanka ku yaalla
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayaa maanta booqasho labo maalmood qaadaneysa ku tegaya Gacanka si uu u xalliyo khilaafka u dhaxeeya Qadar iyo dalalka deriska la ah. Madaxweyne Erdogan ayaa hadal uu jeediyay kahor inta uusan ambabixin ku...
Madaxweynaha Turkiga oo yidhi dalkiisa iyo Maraykankaa la wada dagaalamaya argagixisada
Madaxweynaha Turkiga Racep Tayyip Erdogan ayaa yidhi dalkiisa iyo maraykanku waxay isku raaceen inay la wada dagaalamaan waxa uu ugu yeedhay ururada argagixisada. Wuxu yidhi kuwaa waxa ku jira miditiinta...
Iran oo qabatay dooni kaluumaysi oo Sucuudiga laga leeyahay
Iyadoo xidhiidhka labada dal u dhexeeyaa haatan cakiranyahay, ayaa wakaaladda wararka Iran waxay sheegtay in ciidanka ilaalada kacaanku qabteen dooni kaluumaysi oo Sucuudiga laga leeyahay shaqaalihii saarnaana ay xidheen. Shaqaalaha saarraa doonidu waa shan qof oo Hindi ah waxaana la qabtay doonidooda ka dib markii ay galeen badda Iran sida uu sheegay Ardashir Yar Axmadi oo ah...